အယ်လာမိုကို သတိရကြ (Remember the Alamo)…မငျးတပျရေ ငါတို့မမေ့ထားဘူးဆိုတာ သိထားပါ…..Remember Min Dat! – Shwe Likes
G Shwe | May 20, 2021 | Knowledge | No Comments
အယ်လာမို တိုက်ပွဲမှာ Texians တက်ဆက် တော်လှန်ရေးသမား အယောက် (၂၀၀) လောက်ဟာ အင်အား (၂၀၀၀ ကနေ ၆၀၀၀) အထိရှိတဲ့ မက်ဆီကန်စစ်တပ်ကြီးကို အယ်လာမိုခံတပ်ကနေ ခံချပါတယ်။ ကျနော်သဘောမကျတာက ဒီလောက် အင်အားကွာတာကို သမယ်ဆိုတာသိသိနဲ့နောက်ဆုတ်မပေးပဲခံချခဲ့လို့ပါ။
ပြီးတော့ ဒေးဗီးခရော့ကက်လို အမေရိကန်ကွန်ကရက်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်သူ၊ အများသိဆယ်လီတစ်ယောက်၊ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်က အေးဆေးနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့သွားအသေခံတာလဲလို့ ငယ်စဉ်ကစဉ်းစားမိခဲ့တာပါ။ ဒေးဗီးခရော့ကက် တင်မဟုတ်ပါ။ ကျန်တဲ့လူ ၂၀၀ လောက်ကလည်း တကူးတက သွားပူးပေါင်းတဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ဗော်လံတီယာတွေ ချည်းပါပဲ။
အယ်လာမိုကို သတိရကြ (Remember the Alamo)…
အယ်လာမိုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး အဝေးကနေတကူးတကကို သေမှာသိသိနဲ့လာပူးပေါင်းခဲ့ကြသူတွေ။ အဲ့ဒီမှာ ဗော်လံတီယာဂျွန်ဂျီကင်းဆိုရင် သူ့ရဲ့အသက် ၁၅ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သားက သူ့အဖေကိုမိသားစုကိုလုပ်ကျွေးဖို့ အိမ်ပြန်ခိုင်းပြီး သူကလူစားထိုးအနေနဲ့လိုက်သွားတာ။ သေမှာသေချာသလောက်ရှိတော့ အဖေအိမ်ပြန်ပြီး အမေနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကိုလုပ်ကျွေးပါအဖေ၊ ကျနော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ချသွားတာ။
အဲ့မှာအဖေနဲ့သား … သားရေသားရေနဲ့ ဇာတ်လမ်းလုပ်မနေဘူး။ ရော့သေနတ် ငါ့သား … မက်ဆီကန်တွေကို ကြက်ကြော်လုပ်ခဲ့လို့ပဲမှာလိုက်တာ။ စိတ်ပြတ်သားတဲ့ အဲ့လိုလူတွေ။ Remember the Alamo (အယ်လာမိုကိုသတိရကြ) လို့ သူတို့အကြောင်းသမိုင်းထဲထည့်ပြီးသင်တာ သူတို့ရဲ့စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုဟာ အလကားအချီးနှီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိစေချင်လို့ပဲလို့ နောက်မှသဘောပေါက်လာတယ်။ အယ်လာမိုတိုက်ပွဲအကြောင်းပြောရရင် တက်ဆက်တော်လှန်ရေးသမားတွေက မက်ဆီကိုသမ္မတအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အန်တိုနီယိုဆန်တာအန်နာရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုမခံနိုင်လို့တော်လှန်ကြပါတယ်။
အယ်လာမိုခံတပ်ကို မက်ဆီကန်တွေဆီကသိမ်းပြီးကတည်းက အယ်လာမိုကလူတွေက အမေရိကန်ကိုကူညီဖို့အကြောင်းကြားပါတယ်။ သူတို့မှာငွေကြေးတစ်ဒေါ်လာတောင်မကျန်တော့ကြောင်း၊ လူအင်အား လက်နက်အင်အား ငွေကြေးအင်အားကူညီပေးပါလို့ အကူအညီတောင်းပါတယ်။ မက်ဆီကိုစစ်တပ်ကြီးကလည်း ဆန်အန်တိုနီယိုကို အလုံးအရင်းနဲ့ ဆင်းချလာနေပြီ။ အမေရိကန်ကယ်မှရမှာ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်က မက်ဆီကိုနဲ့စာချုပ်ရှိထားတဲ့အတွက် ကူညီပေးလို့မရကြောင်းအကြောင်းပြန်ပါတယ်။ လောလောဆယ်အရမ်းစိုးရိမ်နေလို့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှာသွားနေနေရကြောင်း၊ တောင်းစိုနေလို့ နေထုတ်လှမ်းနေရကြောင်း ဘာညာ။
အမေရိကန်ဆီ က သာ အကူအညီမရရင် တက်ဆက်တော်လှန်ရေးကျဆုံးမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဒါပေမယ့် ရအောင်တော်လှန်ခဲ့လို့ Republic of Texas နိုင်ငံသစ်တည်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ မက်ဆီကိုသမ္မတအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အန်တိုနီယိုဆန်တာအန်နာက အယ်လာမိုခံတပ်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ စစ်အင်အား ၂၀၀၀ လောက်နဲ့ ဝိုင်းချပါတယ်။ ရှိသမျှလက်နက် အကုန်ထုတ်သုံးပြီး အယ်လာမိုကိုဗုံးမိုးရွာပါတယ်။ လိုအပ်ရင် စုစုပေါင်းစစ်သည် ၆၀၀၀ လုံးထုတ်သုံးဖို့အထိ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
တက်ဆက်တော် လှန်ရေးသမားတွေဟာ အင်အား (၁၈၅) ယောက်နဲ့ မက်ဆီကိုစစ်သား (၁၈၀၀) ကျော်ကို ခံချရာမှာ မက်ဆီကန် (၆၀၀) လောက် ကြက်ကြော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ တက်ဆက်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာ အင်အား (၁၈၂) ယောက်ဟာ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်၊ ကျည်တစ်တောင့်ကျန်တဲ့အထိ လုံးဝနောက်မဆုတ်ပဲ ခံချသွားပါတယ်။ သစ္စာဖောက် (၃) ကောင်ထွက်ပြေးပြီး မက်ဆီကန်စစ်တပ်ဆီမှာလက်နက်ချပါတယ်။ မက်ဆီကန်ဗိုလ်ချုပ်က သေဒဏ်ပေးပြီးပစ်သတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့တော်လှန်ရေး သမားတွေကနော က်ဆုံးအချိန်အထိနော က်မဆုတ် ပဲခံချခဲ့တာလဲ❓
မှတ်ထားပါ … နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်နဲ့ဆုတ်သာပေးေ နရရင်ဆုတ်လို့ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထက်အင် အားကြီးတိုင်းသာ နောက်ဆုတ်ပေးနေရရင် တသက်လုံးတောခိုတော်လှန်တဲ့ဘဝ ပြည်ပြေးဘဝကနေတက်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့သေတဲ့ အထိဒင်းတို့ကိုတော် လှန်မယ်ဆိုပြီး နောက်လူေ တွစံနမူနာယူနိုင်အော င်လုပ်ပြသွားခဲ့တာ။ သေသွားတဲ့သူတွေက နောက်ဆုံးသေသွားတဲ့အထိအပြုံးမပျက်သွားကြဘူး။
မငျးတပျရေ ငါတို့မမေ့ထားဘူးဆိုတာ သိထားပါ…..Remember Min Dat!
(၁) Republic of Texas နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာခြင်း။
တော်လှန်ရေးသမားတို့အတွက် #ကျရှုံးမှုဟာယာယီပဲဖြစ်တယ်။ နေရာဆုံးရှုံးမှုဟာ လူကျရှုံးမှုမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ချင်တဲ့နှလုံးသားမကျရှုံးမခြင်း #တော်လှန်ရေးကမကျရှုံးသွားဘူး။ ၁၈၃၆ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ အယ်လာမိုကိုကျရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ၁ လကျော်အကြာ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ မက်ဆီကိုစစ်တပ်ကြီးကိုအောင်နိုင်ပြီး မက်ဆီကိုသမ္မတဗိုလ်ချုပ်စန်တာအန်နာကို အရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Republic of Texas ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) လူအင်အား လက်နက်အင်အားသာ တိုင်းနိုင်မယ်ချည်း မထင်နဲ့။
အဲ့ဒီ Battle of San Jacinto တိုက်ပွဲမှာ တက်ဆက်တော်လှန်ရေးသမားအယောက် (၉၀၀) ဟာ အယောက် (၁၃၆၀) ပါတဲ့ မက်ဆီကန်သမ္မတဗိုလ်ချုပ်ဦးစီးတဲ့မက်ဆီကန်စစ်တပ်ကြီးကို မတိုက်ခင်မှာ “Remember the Alamo” လို့ကြွေးကြော်ပြီး ကျဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် သွေးကြွေးဆပ်ဖို့ ရဲစိတ်ရဲမာန်အပြည့်နဲ့တိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အယ်လာမိုမှာကျဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ အသက်စွန့်ပေးဆပ်ခဲ့မှုဟာ အလကားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီကန် (၆၅၀) ကိုကြက်ကြော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး (၂၀၈) ယောက်ကို ဒဏ်ရာနဲ့ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီကန် (၃၀၀) ကအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ လက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်ဘက်က (၁၁) ယောက်ပဲကျဆုံးပြီး အယောက် (၃၀) ပဲ ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကွာသလဲသာကြည့်။ မက်ဆီကန်တွေဒီလောက်မသေသင့်ပါ။ တက်ဆက်တော်လှန်ရေးသမားတွေက Remember the Alamo ကိုကြွေးကြော်ပြီး မက်ဆီကန်စစ်သား မှန်သမျှလိုက်သတ်ကာ လက်လွန်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ Suprise Attack #မမျှော်လင့်ချိန်မှာလက်ဦးမှုယူတိုက်တတ်ဖို့ဟာအရေးအကြီးဆုံး။
လူမသိသူမသိအံ့ဩနဲ့အသာစီးရအောင် အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်တတ်ရပါမယ်။ Battle of San Jacinto တိုက်ပွဲမှာ တက်ဆက်တော်လှန်ရေးသမားတွေ ကျဆုံးဒဏ်ရာရမှုနည်းတာက #အလစ်အငိုက်ယူပြီး မထင်မှတ်ချိန်မှာဝင်တိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူသေကိုယ်သေ ရင်ဆိုင်တိုက်ရင် တော်လှန်ရေးသမား ရာနဲ့ချီပြီးကျမှာသေချာပါတယ်။
အယ်လာမို မှာခံချတုန်းက မက်ဆီကန်စစ်တပ်ကို ၁၃ ရက်ကြာအောင်ခုခံနိုင်ခဲ့ပါလျက် မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ မက်ဆီကန်တွေကအမှောင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီး ဝင်စီးချိန်မှာ ကင်းသမားတွေပင်ပန်းပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူကို တစ်ချက်ကလေး အလစ်ပေးလိုက်မိတာနဲ့ တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆပ်ရတတ်ပါတယ်။
မနက်အစောကြီး မနက် ၁ နာရီကနေ မိုးမလင်းခင်အချိန်ဟာ အလစ်အငိုက်ဝင်ဆော်တတ်တဲ့အချိန်ပါ။ ရန်သူဟာဒီအချိန်တော့လာမတိုက်ပါဘူး၊ မလာလောက်ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှမှတ်လို့မရပါ။
(၄) သူရဲဘောကြောင်ဒူးထောက် အညံ့ခံသူတွေဟာသမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းကျန်သွားမှာဖြစ်တယ်။
အယ်လာမိုကနေထွက်ပြေးပြီး မက်ဆီကန်ဘက်သွားလက်နက်ချတဲ့ လောက်ကောင် (၃) ယောက်ဟာ မက်ဆီကန်ဘက်ကသတ်ပစ်တာလည်းခံရသလို သမိုင်းမှာလည်းနာမည်ဆိုးကြီးနဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အယ်လာမိုကျဆုံးပြီးနောက် တက်ဆက်တော်လှန်ရေးယာယီအစိုးရအဖွဲ့ဟာ ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ တက်ဆက်သားတွေပြေးကြရတာကို Runaway Scrape လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုးမယ့်ဆင်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့အားလုံးစုစည်းပြီး မက်ဆီကန်တွေကိုပြန်လည်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အင္တာနက္ သုံးတာ စိတ္ခ်ရလား မရလား စာအရွည္ႀကီးပါ….စိတ္ဝင္စားရင္ အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္ဖို႔ပါ
လိုင်းပေါ်မှ တစ်ဆင့် ကြက်ကြော်မှာစားရာ အိမ်သို့ လာပို့သော အခါ ကြက်ကြော် များ မဟုတ် ဘဲ လက်ကိုင် ပုဝါ များဖြစ်နေ သည့် အဖြစ်
မဖြစ်မနေ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးများ ဖတ်ပေး ကြပါ အရေး ကြုံရင် အသုံးဝင် ပါတယ်